Mesut Ozil ayaa ka fiican Van Persie
Mesut Ozil ayaan waqti fiican ku qaadin Arsenal xiliciyaareed kaan, waxayna ahayd waqti dheer tan iyo markii uu ahaa boqorka caawinta ee garoonka Emirates.
Maxaa talo ah Edinson Cavani Bruno?
Isku aadka Wareega 16ka FA Cup
Waxaa meesha ka saaray tababaraha Mikel Arteta waxayna umuuqataa 32 jirkaan waqtigiisa waqooyiga London inuu dhamaanayo.
Si kastaba ha noqotee, tani had iyo jeer maahan kiiska. Tusaale ahaan, xilli ciyaareedkii 2015-16, wuxuu sameeyay 19 caawin 35 kulan oo Premier League ah, taas oo muhiim u ah in la ogaado madaama Arsenal ay ku dhibtootay hal abuur la’aan xilli ciyaareedkan.
Khabiirka TalkSPORT Adrian Durham ayaa ku taliyay in ku guuleystaha Koobka Adduunka aan laga tirtirin taariikhda Gunner. Wuxuu sidoo kale aaminsan yahay in ciyaaryahanka uu xaq u leeyahay in la dhigo banaanka garoonka Emirates Stadium.
Wuxuu yiri: “Shaki kuma jiro inuu yahay nin karti badan, waxaan u maleynayaa inuu nasiib xun yahay waana ka xumahay.
Runtii waan ku qiirooday xaaladdiisa maxaa yeelay wax badan ayaan ka filanayay.
“Markii uu kooxda la saxiixanayay 2013, wax badan ayaan ka filanayay. Waxay ahayd xagaagii u dhaqaaqistii Gareth Bale ee Real Madrid, waxaanan mooday in Spurs ay ka tagtay laacibkeedii ugu fiicnaa isla markaana aan lahaan doonno mid ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican, kaliya waxaa ii muuqday sawir aan ku fuulayo halka ay Spurs ku sugnayd. hoos u dhacaya. Laakiin taasi ma ahayn.
“Wenger waa diyaar, waqti dheer ayuu joogay Arsenal, Unai Emery waxba ma uusan bilaabin, waa nin aan xitaa koob la qaadin PSG.
“Arteta ayaa ka tanaasulay Mesut Ozil, xiddigani ma lahan tababarayaal fiican oo soo saari kara qaab ciyaareed fiican.
“Si kastaba ha noqotee, waa ila yaab aniga markii aan si dhab ah u daawaday baraha bulshada, waxaan arkay taageerayaasha oo runtii ka hadlaya kubada cagta, ma ahan AFTV iyo qashinkaas, waa dad runtii ka hadlaya kubada cagta waxayna ugu yeeraan Mesut Ozil halyey.
“Mesut Ozil – waxay ku tilmaamaan inuu yahay halyeey Arsenal ah, waxaa jira taageerayaal badan oo dhaha Mesut Ozil waa halyeey Arsenal ah.
“Ma jiraa laacib ka fiican taageerayaasha xilligii Emirates? Miyay u qalantaa in lagu sharfo taalo loo dhiso mise waa buun buunin?
“Haddii aad fiiriso ciyaartoyda ugu fiican xilligii Emirates, waxaan ku dari karaa Theo Walcott, Robin van Persie laakiin taageerayaasha ma jecla Cesc Fabregas laakiin taageerayaasha Arsenal sidoo kale ma jecla isaga.
“Aaron Ramsey waa taageere weyn oo halyeeyga ah, laakiin marka laga hadlayo ciyaartoyda ugu fiican kooxda ay jecel yihiin taageerayaasha sida Wilshere, ma jiraa qof la mid ah Mesut Ozil?
Miyuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican Arsenal ee Emirates? Miyuu u qalmaa taallo?
30 Superb Immune-Boosting Meals
security incidents reported in Bouar and